Amnesia Trance chikadzi mbeu | MyWeedSeeds.com
Kureba: kusvika 35in | 90cm
Nguva yekukohwa: Gumiguru / Mbudzi
Mhedzisiro: inosimudzira zvikuru kumusoro
Iyo Amnesia Trance feminized strain isanganiswa yakasanganiswa kubva pakuyambuka necambodian strain uye inozivikanwa Super Sirivha Haze. Amnesia Trance ndiyo Sativa inotungamira ine 25% indica pesvedzero. Uku kushushikana kwakanaka kwakagadzikana uye kwakagadziridzwa kuwedzera goho uye kukura kunogona kuitika. Nekuda kwesativa kutonga, Amnesia Trance ine euphoric, inozorodza yakakwira uye diki pesvedzero pamuviri wako senge inoratidzira muviri wechiratidzo wakatemwa nematombo. Amnesia ine musky, hwema hwekunhuhwirira hwakasikwa kubva kwaari Haze mubereki. Nekubata kwemichero yezhizha uye maruva emusango, ichi chirimwa chinonakidza chembanje kukura nekuputa. Iwe unozonakidzwa nhanho dzese dzenzira yake! Vashandisi veAmnesia Trance vanoti iyi ipfungwa yakanaka kwazvo yekushandisa kurapwa. Iko kukuru kunonunura kushushikana, kunobatsira pakurwisa kurara, kushaya hope uye nemusoro wemusoro.